WAREYSI:- Xildhibaan Dalxa Oo Si Qoto Dheer Uga Hadlay Sanad Kaddib Wax U Qabsoomay Madaxweyne Farmaajo. – Radio
February 8, 2018	1246	1
Muqdisho (C-Nabadda)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayaa saanad ka hor maanta oo kale loo dhaariyay gudashada wajibaadka Qaran ee ka saaran xilka Madaxweyne, markaas oo loo doortay.
8-February 2017 Doorasho ka dhacday Muqdisho ayaa Madaxweyne (Farmaajo) waxa uu kaga soo baxay si lama filaan ah musharaxiin gaarayay 22 oo kula tartamayay kursigaan,waxaa maanta oo ah 8-February 2018 sanad jirsatay mudda xil heyntiisa, Iyadoona ay jireen ballanqaadyo uu sameeyay intii uu Musharaxa ahaa.
Hadaba Maxaa ka dhaqangalay ballanqaadyadaasi, maxaase dhiman, inkastoo aan Hal sano lagu go’aamin karin fulinta dhamaan balanqaadyadiis oo Saddex sano ay u harsan tahay haddane sanad kadib maxaa lagu qiimeyn karaa wax qabad Madaxweyne Farmaajo ?.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, oo Wareysi Gaar ah Siinayay Idaacada Codka Nabadda, ayaa Ka Hadlay Arrimo badan oo ku saabsan Waxyaabaha u qabsoomay Dowladda Madaxweyne Farmaajo mudada Sanadka ah ee ay Jirtay iyo Waxyaabaha ka khaldamay.
Xildhibaan Dalxa ayaa ugu horeyn sheegay in ay Dowladda uu Hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo mudada sanadka ah ee ay jirto Waxna ay qabatay Waxna ay ka dhiman yihiin Weli.
Xildhibaan Dalxa oo aan wax ka weydiinay Dhinaca Amniga ayaa Tilmaamay in Soomaaliya ay tahay dal cunaqabateyn dhanka hubka ay saaran tahay, taasi oo sabab u ah in aan Wax badan laga qaban karin guulana laga gaari karin Dagaalka Lagula jiro Kooxaha ka soo horjeeda Dowladda, ee dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed, Sida uu Sheegay.
Xildhibaanka ayaa tibaaxay in sidoo kale ay ciidamada Qalabka sida ee dalka oo ahaa kuwiii wax badan ka qaban lahaa Arrimaha ammaanka ay yihiin kuwa aan inta badan haysan waxyaabihii ay u baahnaayeen iyo Mushaar toona, iyagoona sidoo kale ay ka awood badan yihiin Ciidamada Shisheeye ee dalka ku sugan.
Xildhibaan Maxamed Cumar dalxa, oo aan wax ka weydiinay Dhacdooyinkii waa weynaa ee ka dhacay Dalka, Sida Qaraxii Isgoyska Zoobe, Weerarkii Hotel Naaso Hablood 2, Weerarkii ay Dowladdu ku qaaday Hoyiga Siyaasiga Mucaaradka ah ee C/raxmaan C/shakuur iyo Weerarkii Fagashada Ahaa ee Guriga Senator Cabdi Qeyb-diid, in ay yihiin arrimo badan oo ay Dowladihii hore uga duwan tahay Dowladda Farmaajo, ayaa Sheegay in arrimahaasi aysan wax badan soo kordhinayn.
Sidoo kale, dalxa ayaa tilmaamay in Qaraxyada soomaaliya ay la wadaagto Dalal kale oo ka awood weyn, waxaana uu tilmaamay in Weerarada Siyaasiga iyo Senator-ka ay yihiin kuwo ku yimid Khalad iyo Howlo siyaasadeed, waxaana uu tibaaxay in waxaas oo kale loo baahan yahay in laga gudbo.
Ugu Dambeyn Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, ayaa ka hadlay Xariirada Arrimaha Dibedda ee Dowladda Madaxweyne Farmaajo, waxaana uu tilmaamay in wax badan laga qabtay oo ay Dowladdu ku guuleysatay in Sameyso Xiriiro Caalami ah, Isagoona Sabab uga dhigay Sida Hufan ee ay Dowladdu wax uga qabatay Musuq-maasuqa oo uu tilmaamay in ay soo jiidatay Beesha Caalamka.
C/rashiid C/laahi Warsame Ayuu U Waramay Xildhibaan Dalxa.
Gaalkacyo (05-03-2018)-Iyadoo dhawaan Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka Hor-timid Heshiiskii ay ku kala Saxiixdeen Magaalada ...